—— OZI ——
Ugboro ole ka a ga-eji jiri akara ihe owuwu?
Ihe ndi ozo: Akara obosara nke akara ihe ntinye aka na-ekpebi site na obosara nke hopper, nke na-enwekarị 100mm, 150mm, 200mm. Ọfụma na-agbaze agba agba kwesịrị ịdị ọkụ n'etiti 180-230 Celsius itinye. The usoro nke marking ewu nwere ike Olee ihe enyemaka kewara n'ime ntuziaka m ...
Kedu uru nke ụgbọ elu mmiri dị elu maka akara wepu?
Ka ọ dị ugbu a, mgbe emechara marking nke nrụgide mmiri na-eme ka mmiri dị elu, n'ihi na ụfọdụ arụmọrụ na-enwekwa mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi dị elu na nke dị elu karị, usoro mwepụ nke mmiri jet na-ebido na-apụta n'oge akụkọ ihe mere eme, wee bụrụ ụdị akara na ...
Kedu otu esi ekewa igwe eji eme njem?
Igwe ihe eji eme uzo abuo abuo: Njirimara uzo abuo bu akara ntughari di elu meputara n'ime afo ndi a. Ọ dị iche na nchapu ọkụ ọkụ na akara ọkụ ọkụ nkịtị n'ihi ọdịda okpomọkụ ma ọ bụ ihe mgbaze (mmiri na-adabere) ntụgharị na ụzọ ihicha anụ ahụ ndị ọzọ iji mepụta ihe nkiri mkpuchi ....
Gịnị bụ ihe ndị kasị ibu ngwaahịa atụmatụ nke marking igwe?
Njirimara ngwaahịa nke igwe akara: Nrụ ọrụ dị elu na nnukwu mmiri S7000 nwere ike jikọọ egbe abụọ iji rụọ ọrụ n'otu oge, nke na-eme ka arụmọrụ arụmọrụ dị mma ma na-akwado iji nnukwu nozzles eme ihe. Ike: flowgba ọsọ nke 5.8 l / min na-eme ka SF7000 kwesịrị ịbụ nke ...
Kedu akụrụngwa enwere ike iji mee ihe maka ịsa nhicha akara？
Ihe nhicha akara nke paịliki na-ewepu akụrụngwa ọ bụghị naanị na-ebelata nrụgide mmiri n'ozuzu, n'ihi na mmiri jet nwere mmetụta siri ike ma belata ike, eriri nhicha sara mbara apụtala. Green ewu adaba. Okporo ụzọ dum ga-aghọ nke doro anya ...
Ihe ị ga-a paya ntị na ya mgbe ị na-ehichapụ akara akara n'okporo ụzọ
Mark ihicha nwere ike igbochi n'ibu ibiaghachi. Ihe dị arọ nke ka mma, iwu na micro-surface of stroke, ụzọ na-aga n'ihu na-ebugharị onwe ya na paịlị ciment, okporo ụzọ awara awara, akwa akwa akwa, igwe na-agagharị igwe na nhicha nke akara akara, na-egwe ọka ...
Kedu ihe eji eji akara iwepụ?
The akara akara mwepụ magnetite nyo ihe enwekwu eyi eguzogide site 20 ~ 35% tụnyere nkịtị magnetite nyo ihe. Nwere ike zoo aka na ahụmịhe na-aga nke ọma n'ọhịa, gụnyere nyocha na nkwalite nke nzacha mgbasa ozi ntanetị atọ, akwa ntanye nke ...
Kedu esi gbanwee igwe nrịbama mgbe emehie gasịrị?
Igwe ihe nrịba ama na-emetụta ihe mkpopu thixotropic na ntinye akara n'okporo ụzọ iji wepụ ya iji mee ka ya na kọntaktị ụzọ n'okporo ụzọ wepụ. N'okpuru ọrụ nke ihe nhichapụ agba ahụ, agba ụzọ ahụ ga-abanye, gbasaa, ma zaa na 2-10 nkeji. Ahụ na kemịkal gbanwere ...
Kedu ihe utịp nke igbe ụgbọ okporo ígwè dị elu nke aka mbụ nke ụdị chisel?
Ejiri igwe eji edozi ntutu nke mbu nke uzo di elu nke uzo di elu nke uzo di elu nke nwere uzo ogwu. Concrete chiseling on bridge side, Bridge end face, doo n'akụkụ, doo ọgwụgwụ ihu. Wepu mkpuchi ala, agba, na akara okporo ụzọ dị iche iche ...